Kunzwisisa Kukosha kweInventory Quality Guidelines (IQG) | Martech Zone
Kunzwisisa Kukosha kweInventory Quality Guidelines (IQG)
Chitatu, July 6, 2016 Ted Dhanik
Kutenga midhiya online hakuna kusiyana nekutenga kune metiresi. Mutengi anogona kuona metiresi pane chimwe chitoro chaanoda kutenga, asingazive kuti pane chimwe chitoro, chidimbu chimwe chete ichocho mutengo wakaderera nekuti uri pasi pezita rakasiyana. Iyi mamiriro anoita kuti zviomere kwazvo kumutengi kuti azive chaizvo zvavari kuwana; zvimwechetezvo zvinoenda kushambadziro yepamhepo, uko zvikamu zvinotengwa nekutengeswa uye zvinowedzwazve kuburikidza nevatengesi vakasiyana, zvichigadzira musika wemusika une huturu umo vatengi vane kujeka kushoma.
Nyaya yacho inokonzerwa nenyaya yekuti kune zviuru zvemakambani munzvimbo iyi, mazhinji acho ane mitauro yakasiyana, mitemo yakasiyana, metric dzakasiyana uye neimwe nzira yekushandisa bhizinesi ravo. Uku kushomeka kwemaunifomu maitiro kwakatungamira kune iyo TAG Inventory Yemhando Guidelines (IQG), ichibuda chitupa chirongwa chevatengesi veadhijitari. IQG inopa chiyero chekutanga mukutengesa, ichibvumira vatengi kuita sarudzo dzakarongeka zvinoenderana nemhando. Iyo inovimbisa iyo sisitimu yekuchengetedza brand uye pachena kune vatengi.
Chinangwa chechirongwa ndechekusimudzira nharaunda yekuvimba mumusika uye kudzikisira chero kukakavara. Aya marongero anopa mutauro wakajairika uyo unotsanangura zvakajeka hunhu hweshambadziro yekuverenga uye zviitiko mukati mechainoshambadzira kukosha cheni. Vatengesi vanogona kushandisa hwaro hwakajairika hwekuburitsa pachena muindastiri iyi kuona kutevedzera pamwero mukuru uye kuita kuti gadziriso nemakunyunyuta zvigadziriswe.
Vatengesi vane mukana wekukunda kupatsanuka nekutora chikamu muchirongwa cheIQG nekuwana yechitatu-bato kusimbiswa kune avo akasiyana anoenderana kutonga uye maitiro. Iyi mitemo yepasi inoona kuti vatengi vane nzwisiso izere yezvavari kutenga, uye kuti vatengesi vari kuburitsa ruzivo rwakakodzera kuti vafambise izvi; nzira inonzwisisika yekuitisa bhizinesi.
IQG inovandudza iyo indasitiri yese nekuchengetedza vese vashambadzi nevaparidzi. Aya maratidziro anovimbisa zvemukati uye gadziriso mirayiridzo inodzivirira mabhenji nevaparidzi kubva mukubatanidzwa nezviri mukati zvisina kuchengetedzeka. Vashambadziri vanogona kuve nechokwadi chekuti ma ads avo haashambadzwe pane porn nzvimbo, uye vaparidzi vanogona kudzivirira yakaderera-mhando kushambadzira isina kukodzera kuburitswa kwavo kumhanya pane yavo saiti.
Chimwe chinhu chakakosha cheIQG ndechekuti chinomanikidza vatori vechikamu kuti vabudise kunze, zvakanyatsorongedzwa maitiro musangano rese. Dare rekuongorora rinoongorora maitiro uye rinoona kuti kambani inorarama kusvika kune aya marongero. Iyi vimbiso inogadzira macheki uye zviyero kumakambani. Mukuita kudaro, ma Auditor anonyatso bvisa iwo pfungwa yeruzivo rwemasangano nekugadzira makambani gwaro uye kugara mutsetse nemaitiro.
Chekupedzisira, IQG inoisa kukosha uko kukosha kunofanira kuve. Nekusakura kunze kweanopransparent materu ayo asingazivikanwe sosi, vatambi vanokwanisa kuitisa bhizinesi zvakanaka. Izvi zvinobvumidza vese vashambadzi nevaparidzi kuti vataure pachena uye pachena pamusoro pezvinhu zvavari kuita. Nemhando yepamusoro yezvishambadziro mumutambo, vashambadziri vanogona kumhanya zvakanyanya kubudirira mushandirapamwe. Panguva imwecheteyo, uwandu uhwu hunopa vaparidzi mukana wekuwana maCPM akakwira nekuchaja kukosha kwakakodzera kwezvikamu izvi zvakaongororwa.
Kushambadzira pamhepo ibhizimusi diki uye rinoshanduka, uye indasitiri painenge ichikura, vatambi vane mukana wekugadzirisa nekusimbisa kwainotungamira. IQG inokwidziridza mazinga einquery mhando uye inopa mabhenji ane akanyanya mhando uye anoshanda kwazvo muchinjika-chiteshi kushambadzira mhinduro. Iri zvakare rimwe danho mune yedu yakawanda-yakapetwa uye inoshanduka danho rekuona mhando uye kukosha kune wese - mabrands, vamiririri nevaparidzi.
Nezve Kubata: BDR
Shingairira: BDR iri kutungamira mubhadharo mune zviyero uye chitupa kana zvasvika kune antifraud, malware uye huwandu hwehuwandu Shingairira: BDR yakava imwe yemakambani ekutanga kuti iongororwe yakazvimiririra kune QAG zviyero uye ivo vari munzira yekuwana IQG chitupa. Shingairira: BDR inoenderera mberi ichishanda zvishoma nezvishoma nevaparidzi kurwisa zvinhu zvinokanganisa mhando yehunhu.
Tags: kushambadzira kwekushambadzirakushambadzakushambadzira kubiridzirakushambadzira uwandukushambadza mhandoantifrauduwandu hwehuwanduInventory Hutano Guidelinesiqgmalwarekushambadzira pamhepovaparidziTagTAG Inventory Yemhando Guidelinesyechitatu-bato kusimbiswa
Ted Dhanik ndiye CEO uye co-muvambi we ita: BDR, Inc. Ted anoshanda seChief Executive Officer achitarisa zvine hungwaru kushambadzira, kutengesa uye kusimudzira bhizinesi, manejimendi hukama hwehukama uye zvemukati kutora.